SIR LA HELAY: Itoobiya oo heshay meel ay uga duusho Soomaaliya iyo Qorshe lagu bur burinayo Galmudug oo lagu dajiyay Adis Ababa | Booqasho.org News Online - Tabiyaha Wararka Xaqiiqda Ah
Home Wararka Maanta SIR LA HELAY: Itoobiya oo heshay meel ay uga duusho Soomaaliya iyo...
SIR LA HELAY: Itoobiya oo heshay meel ay uga duusho Soomaaliya iyo Qorshe lagu bur burinayo Galmudug oo lagu dajiyay Adis Ababa
Dowladda Itoobiya ayaa badashay qorshaheedii siyaasadda Soomaaliya iyadoo yeelatay saaxiibo cusub kuwaas oo ay u aragto iney ufulin karaan danahooda Soomaaliya.
Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in Itoobiya ay isku dayday iney xariirkeeda koobaad la yeelato maamul goboleedyada dalka, gaar ahaan Jubbaland iyo Koofur Galbeed hase ahaatee awooda maamuladaas ee dowladda dhexe ayay u aragtay mid aanan xooganeyn.
Intaas kadib Itoobiya ayaa si lama filaan ah dalkeda ugu casuuntay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdi Wali Maxamed Cali Gaas maadaama maamulkiisu uu sameyn karo arimo aysan ogeyn dowladda dhexe sida heshiisyada gaarka ah iyo barnaamijyada kale ee dhanka siyaasadda.
Bishii lasoo dhaafay oo kaliya madaxweynaha Puntland ayaa tagay magaaladda Adis Ababa ee xarunta Itoobiya ilaa shan mar iyadoo uu la kulmayay wasiirka arimaha dibadda iyo ra’isul wasaaraha dalkaas.
Waa Maxay Qorshaha Itoobiya ay ka leedahay Puntland?
Puntland ayaa dooneysa iney awood ku yeelato siyaasada Soomaaliya, waxaana ay taageero ka dooneysaa Itoobiya, laakiin qorshaha Itoobiya ay leedahay ayaa ah iney sii wado siyaasada ay kaga hortageyso midnimada Soomaaliya.
Sidoo kale qorshaha Itoobiya ayaa ah in lagu wareejiyo qeybo kamid ah dekadaha deegaanadaas ku yaal gaar ahaan dekadda Garacad oo laga dhigayo mid casri ah, maadaama dekadda Berbera oo ay Itoobiya isticmaali jirtay lagu wareejiyay Imaaraadka.
Itoobiya ayaa sidoo kale kala heshiisay madaxweynaha Puntland inuu ka hor yimaado amarada kasoo baxa dowladda Soomaaliya ee lidka ku ah Itoobiya.
Waa Maxay Qorshaha Puntland?
Cabsida ugu weyn ee ay qabto Puntland ayaa ah in deegaanada Galmudug ay midoobaan gaar ahaan Ahlu Sunna Waljamaaca iyo Galmudug, taas oo caqabad ku noqon karta awooda maamulkooda.
Sidoo kale, hadii ay Galmudug midoobaan waxaa isbiirsanaya Galmudug iyo Hiirshabeele waana arin aysan raali ka aheyn Puntland sida ay wararka sheegayaan.
Iyadoo ay taas jirto ayay Puntland waxaa ay Itoobiya ka dalbatay in ciidamadeeda ay kala baxdo deegaanada Mudug, Galgaduud iyo Hiiraan.
Itoobiya oo aqbashay dalabkaas ayaa si deg deg ah uga baxday Ceel-buur, waxaana sidoo kale ay qorsheynayaan iney ka baxaan qeybo kamid ah Galgaduud iyo Hiiraan.
Sidoo kale Itoobiya ayaa ka shaqeyneysa iney xariir la yeelato madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo iyadoo umareysa madaxweynaha Puntland oo ay isku qabiil kasoo jeedaan.
Previous articleMadaxweyne Cosoble oo magacaabay Wasiiru Dowle
Next articleWasiirka ugu saameynta Badan Xukumada Kheyre oo arin lama filaan ah Muqdisho ka sameeyay